सोनिकालाई जवानी चढेपछि … – manoranjansansar.com | A Entertainment News portal for all
काठमाडौं, ७ माघ । जवानीमा लाली चढ्दा कस्ता होला खै ? तर गायिका सोनिका लामालाई भने काउकुती लागेरै हैरान छ । काउकुती लाग्न थालेपछि उनी ‘जवानीमा लाली चढ्यो, पिरतीको खिल गढ्यो काउकुती लाग्न थाल्यो’ भन्दै श्रोता÷दर्शकमाझ आएकी छन् । सोनिकासँगै मोडल सम्पदा बानियाँलाई पनि जवानीले काउकुती लगाएको छ ।
‘सोनिकाको जवानी’ गीतको म्युजिक भिडियोमा सम्पदाले ‘काउकुती लाग्न थाल्यो’ भन्दै कमर मर्काएकी छन् । सम्पदाको हट एक्पोजलाई श्रोता÷दर्शकले पनि रुचाएका छन् । तर सोनिका र सम्पदामध्ये कसको जवानीमा लाली चढेको हो ? म्युजिक भिडियो हेर्दा छुट्याउँनै गाह्रो छ । उनीहरुको जवानीमा फुल्ने काम भने मोडलद्वय नरेश र विनोदले गरेका छन् । दरबारमार्गस्थित मधुशाला बार र होटल अन्नपूर्ण होटलमा खिचिएको सो म्युजिक भिडियो हिजोआज चर्चामा छ ।
‘आइटम नम्बर’ दिनेक्रममा सोनिकाले ‘जवानीमा लाली चढ्यो’ गीत श्रोतालाई दिएकी हुन् । यसअघि ‘सोनिका’ र ‘यो कस्तो जीवन’ जस्ता एल्बम ल्याएर पनि सोचेजस्ता चर्चा नपाएकी सोनिकाले यसपटक भने राम्रै चर्चा पाइरहेकी छन् । सोनिकाको कामुक स्वर र सम्पदाको हट एक्पोजले ‘जवानी गीत’ चर्चामा आएको हो । मिहिनेत गरेअनुसार गीत चर्चामा आएपछि सोनिका मख्ख छिन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिल्यै आइटम गीत दिएको भए हिट भइसक्थे होला तर बुद्धी नै आएन । अब म आइटम नम्बर मात्र गाउने छु ।’ पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रमा समेत आइटम नम्बरको लहर चलिरहेका बेला सोनिका ‘आइटम’मा रमाउन थालेकी हुन् । उनी ‘आइटम नम्बर’मा रमाउनुको एउटै कारण चर्चाका लागि हो । ‘हरेक क्षेत्रमा चर्चा चाहिन्छ’ सोनिका भन्छिन्, ‘अझ गायनमा त चर्चा नभई हुँदैन ।’ ‘सोनिकाको जवानी’ एल्बमको उक्त भिडियोको निर्माण सुरथ प्रधानले गरेका हुन् ।